Ividiyo entsha i-Apple Shot on iPhone 13. Experiments VI: Movie Magic | Izindaba ze-IPhone
Kulokhu, inkampani yaseCupertino yethula ividiyo entsha ye Uchungechunge lwe- "Shot on iPhone" lapho akhombisa khona ukuthi ungazuza kanjani kakhulu "ngokunye okwengeziwe ngemiphumela" nekhamera ku-iPhone 13 ne-iPhone 13 Pro entsha.
Isihloko esithi, Experiments VI: Movie Magic, le vidiyo entsha ekhishwe yi-Apple ikhombisa ukuthi ungazuza kanjani kakhulu ngamakhamera anamandla afakwa kudivayisi. Okucacayo ukuthi ngenqubo ethile, ezinye izinsiza kanye nesifiso esiningi izithombe ezimangalisayo zingathathwa.
Sabelana lapha ividiyo eshicilelwe yi-Apple lapho beqokomisa amandla ale iPhone ngokwamakhamera ane izincazelo namasu okudubula alesi sifushane Yezesayensi:
UDong Hoon Jun noJames Thornton bayabonakala bechaza ukuthi bayiqophe kanjani le ndaba eqanjiwe yesayensi ngamakhamera we-iPhone 13. Lezi zingcweti emkhakheni ngakho-ke kuyinto ejwayelekile ukuthi umphumela uyamangalisa. Abanye bethu thina bantu benyama singasebenzisa amanye amaqhinga avela kulezi zithombe ngamavidiyo ethu, yize kunzima ukufinyelela emazingeni atholakele kulokhu okufishane.
Umkhankaso we-Apple "Shot on iPhone" ube yisilinganiso kumavidiyo wobuciko nokusebenza iminyaka eminingi, muhle impela ngezindlela eziningi futhi ngukuthi ngaphezu kokukhombisa okungenziwa ngekhamera ye-iPhone yethu noma ngabe hhayi imodeli yakamuva ekhishiwe. Lawa mavidiyo aqhakambisa umsebenzi omkhulu nobuchule babasebenzisi nabachwepheshe abenza lolu hlobo lwezikhindi ngocingo oluphathekayo, into eminyakeni embalwa edlule eyayingacabangi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » Ividiyo entsha Apple Shot on iPhone 13. Experiments VI: Movie Magic
Manje isiyatholakala ku-Apple TV +, Invasion, uchungechunge olusha lwe-sci-fi lwe-Apple